ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ သုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်မှာ မြန်မာ့သယံဇာတ ကျောက်စိမ်းမြေကို ဘီလူးတွေဝင်စားသလို အလုအယက်ဝင်ဆွဲနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေပြုရေးအကြီးအကဲ သူရဦးရွှေ့မန်း က အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြန်လည်ဖြေကြားဖို့ သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အထူးနစ်နာနေတဲ့ ဒီသယံဇာတ ဓါးပြမှုကြီးကို ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ် ပူးပေါင်းဟန့်တားနိုင်မယ့် အခြေအနေ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ သူတို့က ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်၊ ပြည်သူလူထုက လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမလားဆိုတာ လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်တို့နဲ့ ဦးကျော်ဇံသာတို့ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုနေကြတဲ့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးရဲ့  ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့  ခံစားချက်ကို အကြမ်းမျဉ်း ကျနော် သိချင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့။ ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ပြောပါခင်များ။
ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က ကချင်ပြည်နယ်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခက်ထိန်နန် က ဒီကိစ္စကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လွှတ်တော်ကိုတင်တယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆွေးနွေးကြတယ်။ အဲဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက ဦးရွှေမန်းက သမ္မတကို စာရေးပို့တယ် …. ကျနော်တို့ နေ့ခင်းပိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးက လွှတ်တော်မှာ လာရှင်းပါတယ်။ အဓိကအချက်က အဲဒီနေရာမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိဘူး .. တခြားဟာတွေလည်း မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပြောတာ။ ဒါပေမဲ့ ကျောက်စိမ်းတူးတာကို ဒီလိုမျိုး ခွင့်ပြုတာလဲဆိုရင် ကျနော်တို့သိတာက အစိုးရက နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျက်လိုငွေက တအားပြနေတယ်။ ကျနော်တို့ အခု ၂၀၁၆-၁၇ ဘတ်ဂျက်ကို ဆွဲတော့လဲ ဘတ်ဂျက်အခြေအနေက မကောင်းဘူး။ တဖက်ကလဲ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဈေးနှုန်းတွေ ကျနေတော့ အစိုးရက ဝင်ငွေ တအားလိုနေတယ်။ လိုနေတဲ့အခါမှာ ဒီ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကို မလုပ်မဖြစ် ခွင့်ပြုတယ်။ တဖက်ကလဲ ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းမှာ ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် အရင်လောက်ထွက်နှုန်း မကောင်းတော့ဘူး။ အကုန်ရောင်းပြီး စက်ကြီးတွေနဲ့ ပိုးစိုးပက်စက် တူးကြတယ်။ အဲဒီမှာ ကေအိုင်အေကလဲ ဝင်ပြီးတော့ ဆက်ကြေးကောက်တယ်။ မင်းတို့ အစိုးရနဲ့ ကန်ထရိုက်တူးတာကို ငါတို့ကို ဘယ်လောက်လာပေး။ မပေးဘူးဆိုရင် မင်းတို့စက်တွေကို မီးရှို့ မယ်၊ လူတွေကို သတ်မယ်ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီတော့ ကျောက်တူးနေတဲ့ လူတွေကလည်း ဟိုဘက်ကိုကြောက်ရ၊ ဒီဘက်ကို ကြောက်ရ … အခြေအနေက ထိန်းသိမ်းမှုက ဘာမှကောင်းကောင်းမရ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါက ပကတိ အခြေအနေပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးသိန်းသန်းဦး ခင်များ … အခုန ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ပြောတဲ့အထဲမှာ စိတ်ပျက်စရာ အကောင်းဆုံး ကြားရတာ တချက်ကတော့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိ ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်က ဖြေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို နားလည်ရမလဲ။
ဦးသိန်းသန်းဦး ။ ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ပဲ ဒီလိုပဲ ယူဆရမှာပါ။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေ မစိုးမိုးတာ ကြာပါပြီ။ အနှစ် (၆၀) လောက် ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ အခုတော့ ဗြောင်ဝန်ခံတာပေါ့။ အခု ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကလဲ တရားမဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာ။ သက်ဆိုင်ရာ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ဒီမြေတွေမှာ ဒီလိုတူးနေတာ မသိဘူးလို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ တာဝန်မဲ့မှုက တကယ့်ကို တရားဝင် အစဉ်အလာတရပ်လို ဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တော့မှ တာဝန်မယူဘူး။ အဲဒီလို လက်လွှတ်စပယ်ပဲ ဖြေကြတာ။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိဘူးဆိုတာ အမှန်တရားပြောရရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အနေအထားကို ဝန်ခံလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော်တို့ ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ ရှေ့ တိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ရှေ့ ကို ဆက်တိုးကြမလဲ။
ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ။ ။ အဓိကက ကေအန်အေ နဲ့ ဝ တို့ကို ဒီဘက်က ဗမာဘက်က အနိုင်မတိုက်နိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တဖက်ကလဲ ကေအန်အေ နဲ့ ဝ တို့က သူတို့ဆက်သွယ်နေတဲ့ လူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ ခင်များတို့ သိတယ်ပေါ့။ .. အာဏာလွှမ်းမိုးလို့ မရဘူး။ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် က ကျနော်ကို လာပြောတယ်။ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလူတွေ၊ ကေအိုင်အိုက လူတွေပြောတာက ကိုယ့်နေရာကိုယ် အေးအေးဆေးဆေးနေ။ နေလို့ရှိရင် မင်းတို့အတွက် အချိုးကျရမယ်။ မနေဘူးဆိုရင် အသတ်ခံရမယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးလူကလဲ ကေအိုင်အေ ကို တဘက်ကကြောက်တယ်။ တဘက်က လာဘ်ယူတယ်။ နောက် စစ်တပ်ကလဲ မလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပြောတဲ့အချိန်မှာ ဗမာဘက်က တပ်တွေ သောက်သောက်လဲကျလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီတော့ တဘက်က ပြောတဲ့လူက ပြောနေတယ် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး။ ခင်များတို့ သွားရင်လဲ ခင်များတို့ အသတ်ခံရနိုင်တယ်။ ကျနော်က မြင်နေရတာက အသတ်ခံရတာတွေ။ အဲဒီတော့ အသတ်မခံရချင်ရင် အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကို ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်ရတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီနေရာတွေက ဦးသန်းရွှေ နေရာလဲ မဟုတ်ဘူး။ သောင်းကျန်းသူတွေ၊ သေနတ်ကိုင်သူတွေ၊ လျင်တဲ့လူတွေနေရာ ဖြစ်နေပြီ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခုက အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေပေါ့။ သူတို့ကို ကြောက်နေရတယ်ဆိုတာက။ အထက်အာဏာပိုင်တွေက တရားဥပဒေနဲ့ မလုပ်နိုင်ဘူးလား ဒီကိစ္စကို။ ဘယ်သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေတာ ကျနော်တို့သိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလို့ ဆရာက အကြမ်းမျဉ်း ပြောလိုပါလဲ။
ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ။ ။ ကေအိုင်အေ နဲ့ ဝ တို့ကို အားပေးနေတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ တဘက်နိုင်ငံက အားပေးနေတာ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ တဘက်နိုင်ငံကို ကြောက်နေရတာပေါ့။ အဓိကအားဖြင့် တရုတ်ပယောဂကြောင့် မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား။
ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ။ ။ မှန်တယ်။ ဒီလိုမှန်တယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ တရုတ်နဲ့ သာမန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေက အခုကြည့်လေ သမ္မတက တရုတ်သစ်ခိုးတဲ့သူတွေကို (၁) ပတ်အတွင်း လွတ်တယ်။ အဲဒီထဲက ခင်များတို့ သဘောပေါက်ပေါ့။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးက တပ်မတော်က တချို့ ကိစ္စတွေမှာ သူမနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောပြီးပြီ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ အမိမြေကို တစ်လက်မ အထိမခံဘူး။ ဘာညာဆိုတာတွေ အလကားပဲပေါ့။ ကျနော် သိချင်တာက စောစောက ပြောတဲ့ အာဏာရှင်နဲ့ အလွမ်းသင့်တဲ့ ခရိုနီတွေ၊ စစ်တပ်ရဲ့  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကကော ဒီအထဲမှာ ဘယ်လောက် ပါဝင်နေပါလဲ။ သူတို့က မပါဘူးလား။
ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ။ ။ ကျနော်ကို …. အကြီးစားမန်နေဂျာတစ်ယောက် ပြောတယ် ကျနော်တို့ မလုပ်ချင်ဘူးတဲ့။ ကျနော်တို့ အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုပ်ပြီး လုပ်နေရတာတဲ့။ ဒါပေမဲ့ တဘက်က အစိုးရကအဖွဲ့က မင်းတို့လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ လုပ်တာ။ နောက် မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူတယောက်ရှိတယ်။ ငွေမဲကို ငွေဖြူဖြစ်အောင် လုပ်တယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒါကတော့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်လွန်ပါတယ်။ ဦးသိန်းသန်းဦး ဘယ်လို သဘောရပါလဲ။ ဟိုဘက်က ခြိမ်းခြောက်ပြီးတော့ အသက်အန္တရာယ်ကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောရဘူးဆိုပြီး အောက်ခြေအာဏာပိုင်တချို့ က ပြောတဲ့ကိစ္စကို ကျနော်တို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေရမလား။
ဦးသိန်းသန်းဦး ။ ။ ကျနော်ကတော့ အချုပ်အခြာအာဏာက ဘယ်သူ လက်ထဲမှာ ရှိသလဲ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ စဉ်းစားရမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီ သယံဇာတတွေက အခုပိုပြီးတော့ ထင်ထင်ရှားရှား မြင်လာရပြီပေါ့။ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမှာ ဘာကြောင့်မို့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်လဲဆိုတဲ့ ပြဿနာဟာ ဒီ အခက်အခဲတွေ ပါနေတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ဘူးဆိုတာ ပေါ်တယ်။ ဒီဟာက အချက်အလက်တခု အနေနဲ့။ တခြားဘက်ကလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကို အခွင့်ထူးယူပြီးတော့ အခုန ဆရာပြောတဲ့ တဘက်နိုင်ငံဆိုတာလဲ သစ်တောတွေခုတ်၊ အထဲတွေဝင် ဒါတွေကလဲ သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ လုပ်လို့တော့ မရပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့  အချုပ်အခြာအာဏာထဲကို ဝင်ရောက်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင်နေတာ၊ လုပ်ပြီးတော့ စွက်ဖက်နေတာ။ ဒါတွေက မြင်တွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတွေပဲ။ ဒါဟာ သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ သက်သက်တော့ လုပ်လို့မရဘူး။ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေလဲ။ အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုပ်ထားဆိုတာ ဟုတ်မှာပါ။ ဒါက လက်နက်က Jungle law ပေါ့။ သေနတ်ရှိတဲ့လူက ဗိုလ်ကျတဲ့ စနစ်က ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အမြစ်တွယ်လာတာ အနှစ် (၆၀) လောက် ရှိနေပြီ ဆိုတဲ့အခါကြတော့ အဲဒီနေရာတွေမှာ သူ သေနတ်ကိုင်၊ ကိုယ်သေနတ်ကိုင်နေတော့ ပိုပြင်းထန်လာတာပေါ့။ ပြည်တွင်းမှာတော့ တိုင်းသူပြည်သားက သေနတ်မရှိတဲ့အခါကြတော့ သေနတ်ရှိတဲ့လူ အနိုင်ကျင့်တာ ခံနေရတဲ့ ဘဝကနေ၊ သေနတ်-သေနတ်ချင်းကြတော့ ပိုပြီးတော့ လုကြတဲ့အခါကြတော့ ပိုပြီးတော့ ကြီးတဲ့သေနတ်က ပိုပြီးတော့ အာဏာရှိတဲ့ သဘောပါပဲ။ အဲဒီအခါကြတော့ သေတဲ့သေနတ်က ကြီးတဲ့သေနတ်ကို မပြောဝံ့တဲ့အခါ ဖြစ်တာပေါ့။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နှစ်နိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ ကျနော်တို့ အနောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကိစ္စ ဆိုကြပါစို့။ ရေအောက်က သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးကိစ္စနဲ့ အငြင်းပွားတယ်။ ဒါက နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ အငြင်းပွားမှုဆိုရင် ICJ ရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာ သက်ဆိုင်ရာ ခုံရုံးတွေ ရှိတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းက ဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဒီကိစ္စကို နိုင်ငံတကာအထိ သွားလို့မရဘူးလား။ တကယ်လို့ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဖြစ်တဲ့ပြဿနာသာ ဖြစ်ခဲ့တာမှန်ရင် နိုင်ငံတကာကို မတင်သင့်ဘူးလား။
ဦးသိန်းသန်းဦး ။ ။ တင်သင့်တာပေါ့။ ကိုယ်က ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့။ ဒါပေမဲ့ တခုရှိတာပေါ့။ ကိုယ်က သူဆီက ပိုက်ဆံချေးထား၊ သူ့အရိပ်ခို၊ သူ့ကျေးဇူး ရှိပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီးတော့ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးစွပ်ဖို့ ခက်နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါက ကိုယ့်အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့  ပြဿနာ ကြုံတွေ့နေတဲ့ ကိစ္စတရပ်။ တကယ့်တကယ် ကျနော်တို့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား နဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့  အပေါ်မှာ တာဝန်သိမှု အခြေခံပြီးတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့  သယံဇာတတွေ ပျက်သုဉ်းမသွားအောင်၊ သစ်တောတွေ ပြုန်းမသွားအောင် ဒီလိုကိစ္စတွေက ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုကမ္ဘာကြီးရဲ့  အနေအထားက ထင်သလို လုပ်လို့ရတဲ့ (၂၀) ရာစု အနေအထားမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးတွေ ရှိတယ်။ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ တခြားကိစ္စတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကိစ္စတွေ ကျနော်တို့ မြင်နေရတာပဲ။ ဒီလို ပြောနိုင်တဲ့ဟာတွေ ရှိတယ်။ ပြောရဲဖို့နဲ့ ပြောဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ တာဝန်သိဖို့ အဓိက လိုအပ်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ပြောတော့ ပြောသင့်တယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော် တခု သတိရတယ်။ တချိန်တုန်းက ဝန်ကြီးတပါးက ပြောဖူးတယ် မဟုတ်လား။ လက်ရှိ ဝန်ကြီးကပဲ တရုတ်ရဲ့  ကျေးဇူးကို မမေ့ပါနဲ့လို့။ ဆရာဖုန်းမြင့်အောင်လည်း မှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။ ဦးသိန်းသန်းဦး ပြောသလို တရုတ် ကျေးဇူးကိုများ ငဲ့ကွက်နေရလို့ဆိုရင် နည်းနည်းလွန်လွန်းတာပေါ့။ ကျနော် ဒီမှာဆက်ပြီး ကြည့်ချင်တာက မြစ်ဆုံတုန်းကလည်း တရုတ်နဲ့ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ။ ပြည်သူတွေရဲ့  အင်အားနဲ့လိုပဲ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟန့်တားနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုအခါမှာကော လူထုနည်းနဲ့ ဟန့်တားနိုင်တဲ့ အလားအလာ ဘယ်လောက် ရှိပါလဲ။ လူထုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ပြောပါခင်များ။
ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ။ ။ လူထုက ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ ကျနော်တို့တောင် ကချင်ပြည်ကို မသွားရဲဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်လဲ အဲဒီနေရာမှာ အားလုံးကို ကြောက်ရမယ့် အခြေအနေဆိုတော့ မသွားရဲဘူး။ ပြည်သူလူထုနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ လူထုနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကချင်ပြည်နယ်ကို ရောက်နေတဲ့ ရခိုင်တွေ အများကြီးရောက်တယ်။ ကျောက်တူးတယ်။ ရေဆေးကျောက်လိပ်တယ်။ ကေအိုင်အေနဲ့ နီးစပ်လို့ ခါတော်မီ သူပုန်ကောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ဒီကသွားတဲ့လူတွေက သူပုန်ဖြစ်သွားကြတာ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးသိန်းသန်းဦး ခင်များ … မြစ်ဆုံတုန်းက လုပ်ခဲ့တာကို အတော်လေး နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်မိပါတယ်။ အခုကော မြစ်ဆုံမှာလို ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ဘူးလဲ။ လုပ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလား။
ဦးသိန်းသန်းဦး ။ ။ အကြောင်းကတော့ ရှိတယ်။ လူထုကို တကယ် ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်။ ပြည်သူလူထုကြီးကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောပြ။ အခုဖြစ်တဲ့ MATA နဲ့ EITI ကိစ္စတွေလည်း ဆက်စပ်မှုရှိတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ ဥဿုံပျက်စီးပြုန်းတီးနေရတာ ဒါတွေအကုန်လုံးက ကျနော်ပြောခဲ့သလို ငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာပါ။ ဒီ သယံဇာတတွေက သူ ယူမယ်၊ ကိုယ်ယူမယ် အနေအထားတွေ။ အဲဒီလို အနေအထားမျိုးတွေ ရှိနေပြီးတော့။ တကယ်လို့သာ အခြားနိုင်ငံတခုက ဘယ်နိုင်ငံလို့ မပြောပါဘူး။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်ပြီးတော့ သယံဇာတတွေ ထုတ်နေတယ်။ အနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတရပ်က ကိုယ့်လူထုကို လှုံဆော်၊ ကိုယ့်တပ်ကို အင်အားဖြည့်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာစင်မြင့်ကို တင်သင့်တဲ့ကိစ္စ။ မြစ်ဆုံနဲ့ မတူတာကတော့ မြစ်ဆုံတုန်းကတော့ ကျနော့်တဦးချင်း အယူအဆအရ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက သမ္မတအိုဘားမားရဲ့  မြန်မာပြည်အပေါ် နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို ပြောင်းလဲမှုကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်ဖို့အတွက် မီးစိမ်းပြပြီးတော့ ရပ်လိုက်တာလို့ ယူဆတယ်။ အခုအခြေအနေကတော့ ပိုရှုပ်ထွေးတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ပြဿနာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့  နောက်ဆုံးကာလကို ရောက်နေတဲ့ အနေအထားတရပ် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်း ရှိဖို့လိုတယ်။ နောက်တခါ လုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိလည်းရှိဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ကို ကျနော် မေးချင်တာ တခုက အခု လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ က နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီ စာရေးတယ်ဆိုတော့ အဲဒီနေ့မှာပဲ စက်မှု ဒုတိယဝန်ကြီးကလာပြီး ဖြေရှင်းတယ်။ အဲဒီ စာပေးတဲ့ကိစ္စ။ ဒီလောက်နဲ့ ပြီးပြတ်သွားပြီလား။ နောက်ထပ် ဘာများ ပြန်လည်တုံ့ပြန်လာဖို့ မျှော်လင့်ချက် ရှိပါလဲ။ နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား သမ္မတဘက်က။ ပြီးတော့ လွှတ်တော်ဘက်က ဘာများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါလဲ။
ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ။ ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ဝင်ဖြေသွားတဲ့ ဦးရွှေမန်းနဲ့ အဲဒီအချိန်ဆွဲကြမှာပဲ။ ထူးထူးခြားခြားတော့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တခုက အခုန ဆရာပြောသလို မြစ်ဆုံနဲ့ မတူတာက မြစ်ဆုံက position က တနေရာထဲမှာပဲ ရှိတာ။ ဒီ position က မရွေ့ တော့ဘူး။ ဖားကန့်မှာတော့ position က မျိုးစုံရွေ့ နေတာ။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ အစိုးရအာဏာလည်း မရှိဘူး။ စစ်တပ်ကလဲ ဒီနေရာမှာ အာဏာမရှိဘူး။ သူတို့လည်း ထိန်းမရတော့ဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဦးသိန်းသန်းဦး ကို နောက်ဆုံး မေးချင်တာက ဒီ စိန်ခေါ်မှုကြီးဟာ အာဏာလွှဲပြောင်းပြီးလာရင် အစိုးရသစ် တက်လာရင်ကော ကိုင်ရတွယ်ရ လွယ်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုတာကို သုံးသပ်ပြပါ။
ဦးသိန်းသန်းဦး ။ ။ ကျနော်ကတော့ မျှော်လင့်တယ်။ တိုးတက်လာမယ်ဆိုတာ သူတို့က တခဲနက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ လူထုအစိုးရဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုကြီးက အဲဒီအစိုးရ ဆုံးဖြတ်တာကို နောက်က ရဲရဲကြီးနဲ့ လိုက်ကြမှာ။ နောက်ပြီးတော့ ဒီကိစ္စက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးသာ ရှိခဲ့ရင် ဒီလို လူမသိသူမသိ နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပဲ ရှိပါတယ်။ နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရကို ခေါင်းဆောင်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အမျှော်အမြင် ကြီးမားပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံလည်း ရှိပြီးတော့ သတ္တိရှိရှိ ရဲရဲရင့်ရင့် တိုင်းပြည်ရဲ့  အခြေအနေကို ပြည်သူလူထုကို ချပြရဲတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက် ဖြစ်တယ့်အတွက် ဒီကိစ္စဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်လာရင်တော့ ပြေလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။